सिभिल हस्पिटलमा राति ३ बजेदेखि लाईन बस्छन् ८१ वर्ष सम्मका विरामीहरु ( तस्वीर र भिडियो सहित )::mirmireonline.com
सिभिल हस्पिटलमा राति ३ बजेदेखि लाईन बस्छन् ८१ वर्ष सम्मका विरामीहरु ( तस्वीर र भिडियो सहित )
काठमाण्डौं कार्तिक २६ । पछिल्लो समय बदलिदो वातावरणीय अवस्था , बढ्दो शहरीकरण र प्रदुषणका कारण राजधानीमा बस्ने लाखौं मानिस कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तोमा उपत्यका बाहिरबाट पनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालको खोजीमा काठमाण्डौ आउनु पर्ने बाध्यता छ । अहिले सरकारी तथा निजी गरी १ सयको हारहारीमा अस्पताल राजधानीमा रहेको अनुमान गरिएको छ तर पनि यी अस्पतालहरुमा सर्वसाधारणले सरल र सहज रुपले उपचार पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय सन् २००९ देखि सञ्चालनमा आएको निजामति सरकारी कर्मचारीहरुका लागि भनेर चीन सरकारले उपहारको रुपमा बनाईदिएको मिनभवनमा रहेको सिभिल हस्पिटलमा अहिले विरामीहरुको चाप यति धेरै बढेको छ कि डाक्टरको लागि टिकट पाईदैन कि भनेर मानिसहरु यस्तो चिसो ठिहीमा पनि राति ३ बजेदेखि लाईनमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
राम्रो उपचार हुने विस्वासले सर्वसाधारण पनि अहिले ठूलो संख्यामा यस अस्पतालमा आउने गरेका छन् भने अर्को तर्फ कर्मचारीहरुकै अस्पताल भनिएकाले कर्मचारीहरु पनि ठूलै संख्यामा उपचारका लागि आउने गरेका छन् । मिर्मिरे अनलाईन प्रतिनिधिले केही दिन अघि सिभिल अस्पतालमा राति देखि नै लाईनमा बसेका सर्वसाधारण देखि ८१ वर्षका सेवा निवृत कर्मचारीहरुसग‘ कुराकानी गरेका छन् । यस कुराकानी अनुसार आकस्मिक सेवामा आएका कतिपय मानिसले भर्ना हुन बेड नभएका कारण फर्किनु परेको छ भने कतिले राति देखि लाईन बस्दा पनि टोकन लिने बेला सम्म डाक्टरको बिरामीको कोटा सकिएकाले कहिले काही रित्तै फर्कनु पर्ने हुन्छ ।
लाईन बस्नेहरुको गुनासो यस्तो छ ( भिडियो )
विराटनगरबाट आफ्नो बुवालाई विरामी भएर ल्याएकी भक्तपुरकी दुर्गा देवी गौतम अस्पतालमा लाईन बस्न रातभर नसुतेको बताईन् । त्यसै गरी कोटेस्वरबाट आएकी परमिला रायमाझीको अनुभव पनि उस्तै छ । विहान पौने ४ बजेदेखि लाईन बसेकी उनी पटक पटक टोकन नपाएर फर्कनु परेको गुनासो पोख्छिन् । त्यसै गरी बिहान लाईनमा उभिएकी खरीबोट शान्तिनगरकी पेम्वा शेर्पालाई पनि लामो लाईन बस्नु परेकोमा दिक्क लागेको छ । बुढेसकालमा सरकारले लाईन बस्नै नपर्ने गरी हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छिन् ।
यसै गरी कर्मचारीहरु पनि बिहान सबेरै लाईन बस्न आईपुग्छन् । काभ्रेको एक श्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत लक्ष्मी भट्टराई सुगरको विरामी छन् । डाक्टरले उनलाई बिहानको राति ३ बजे खान भनेको हुन्छ तर उनी लाईन बस्ने हतारमा आउनु परेको छ , उनी भन्छिन् यस्ता धेरै समस्याहरु छन् केही राम्रो व्यवस्था गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छिन् । पेप्सीकोलाबाट श्रीमतिको मुटु रोग परीक्षण गराउन पटक पटक लाईन बस्दा समेत टिकट नपाएको गुनासो कटक राई गर्दछन् । उनी अस्पतालमा आए पछि जनताले दुखः नपाई उपचार पाए हुन्थ्यो भन्ने सुझाव दिन्छन् ।
सरकारी कर्मचारी नै पनि डाक्टर आउने नआउने समस्या थाहा नपाउदा लाईन बस्दा पनि जचाउन नपाउने समस्या रहेको गुनासो गर्दछन् । गोरखाबाट अमलदारको रुपमा जागिर खाएर पुनरावेदन पाटन अस्पतालबाट सेवानिवृत भएका ८१ वर्षे गणेशभक्त श्रेष्ठ बिहान ५ बजेदेखि लाईनमा आएका छन् । उनी मात्र हैनन् बुहारी ईन्जिनियर भएका कारण कर्मचारी परिवारको रुपमा सहुलियत पाउने भएका कारण शंखमुलबाट आएकी हिरादेवी प्रधान पनि ८१ वर्षको उमेरमा ९ बजे हुने स्वास्थ्य जाचका लागि बिहान ५ बजे लाईनमा आईपुगेकी छन् ।
लाईन बस्दा समेत टोकन नपाउदा दिक्क लाग्छ
काठमाण्डौकी मिलन राईको छालामा डन्डीफोर र पोतोको समस्या थियो । त्यसैले उनी आफ्नो छाला जचाउन बिहान साढे पाच बजे लाईन बसेकी थिईन् तर जब ७ बजे पछि टोकन खुल्यो , त्याहा पुग्दा छालाका रोगीको कोटा पूरा भईसकेको थियो र उनी खिन्न हुदै घर फर्किन । अधिक बिरामी तथा उनका आफन्तहरु जो लाईनमा बस्दछन् उनीहरु मध्यले एकै दिनमा टोकन पाउन समस्या भए पछि लाईनमा अझ छिटो बस्न थालिएको सर्वसाधारणको अनुभव छ । यो पट्यारलाग्दो लाईन , लाईन पछि टोकन र टोकन पछि डाक्टर सम्म पुग्दा सर्वसाधारण दिक्क अनुभूति गर्दछन् ।
अस्पतालका कर्मचारीको रुखो व्यवहार ?
सिभिल अस्पतालमा लामो लाईन र व्यवस्थापनमा जटिलताका कारण कर्मचारीहरु लाई तनाव हुन सक्छ । तर यसको यो अर्थ हैन कि उनीहरुले विरामीलाई नै राम्रो व्यवहार नगरुन् । लाईनमा बसेका विरामीहरु धेरैले लाईन मिलाउने , डाक्टर सम्म पुग्ने कोठामा क्रम मिलाउने क्रममा निकै झर्को फर्को गर्ने गरेको गुनासो विरामी र उनका आफन्तहरुको छ ।
यति मात्र हैन कि कर्मचारीहरुले आफ्नै अस्पतालमा कर्मचारीहरुले दुरव्यवहार गर्ने गरेको गुनासो अस्पताल प्रशासनमा दिनहु जसो कम्लेन गर्ने गरेका छन् ।
कतिपय कर्मचारी उच्च ओहोदामा रहनेहरुले व्यवहार सभ्य नभएको गुनासो कार्यकारी प्रमुखकैमा समेत गएर गर्ने गरेका छन् । यस विषयमा कार्यकारी निर्देशक डा. थापाले कर्मचारीहरुले आफूलाई कार्यलयमा जस्तै हैसियत अनुसार सम्मान गर्नु पर्छ भन्ने सोच्ने गरेकाले समस्या भएको हुन सक्ने तर अस्पतालमा नियमित ओरियन्टेसन मिटिगं राखेर राम्रो व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने कुरा राख्ने गरेको बताए ।
कति क्षमता छ सिभिल अस्पतालमा ?
कर्मचारीहरुको लागि मात्र बनाईएको हुनाले मिन भवनमा करीब ७० रोपनी जग्गामा फैलिएको अस्पतालमा १ सय ३२ वटा मात्र बेड छ । कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई अलग्गै लाईन राखेर बिहान दिउसो र साझमा पेईङ क्लिनिकमा समेत गर्दा दैनिक ६ सय देखि ८ सय विरामीको जाच हुने गरेको सिभिल अस्पतालका निर्देशक डा. बिमल थापा बताउछन् ।
यति गर्दा पनि विरामीको चाप थेगिनसक्नु भएका कारण विकल्प सोच्नु पर्ने डा. थापाको भनाई छ । नेपालको एक मात्र बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर यसै अस्पतालमा मात्रै छ । डाक्टर र कर्मचारी गरेर करीब ३ सय जना यस अस्पतालमा कार्यरत रहेका छन् ।
कसो गर्दा राम्रो होला त ?
सिभिल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा थापाले सुझाए अनुसार सिभिल अस्पतालमा मानिसहरुको भीड लाग्नुको एउटै कारण उपचारको गुणस्तरीयता हो । उनले मिर्मिरे अनलाईनसग‘को कुराकानीमा बीर अस्पताल सहित सबै अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा दिने हो भने विरामीको चाप कम हुने थियो कि भन्छन् ।
उनको सुझाव अनुसार सबै सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा दिने र राम्रो प्रयोगशाला र उपकरणहरु राखेर सिस्टमेटिक काम गर्ने हो भने यो चाप घट्न सक्छ । अन्यथा अस्पतालले के गर्ने भनेर सोच्ने अवस्था आएको छ ।
निर्देशक डा. थापाले अब केही समय लगत्तै अनलाईनबाटै टिकट काट्ने र डाक्टर भेट्ने टाईम फिक्स गरेर आउने सिस्टम लागु गर्ने योजना रहेको बताए । त्यसले गर्दा राति देखि नै हुने लाईन र भीडभाड कम हुने थियो कि भन्ने डा. थापाको विष्लेषण छ । उहाले अब चीन सरकारले अस्पताललाई पनि थप १ सय २० शैया थपेर क्षमता विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएकाले २ वर्ष भित्र केही सहज हुन्छ कि भन्ने अनुमान पनि गरे । तल तस्वीरमा हेर्नुस सर्वसाधारण राति देखि कसरी लाईनमा बसेका छन् :